Efa misokatra moa izany ny sisin-tany?
vendredi, 13 novembre 2020 13:50
Rehefa mapanankanto malaza vahiny moa izany dia mahazo mivoaka ny Nosy be andeha hanao fampisehoana sy lanonana mitety an'i Madagasikara?
Nigadona tamin'ny sidina tao Nosy be ny mpanan-kanto afrikanina atsimo, Nomcebo Zikode, ka niakatra an'Antananarivo tamin'ny fiaramanidina Tsaradia, ary izao nihazo an'i Sambava izao indray.
Hanomboka ao Sambava ny fampisehoana, hitohy ao Toamasina sy Mahajanga, ary hiafara ao amin'ny Coliseum Antananarivo
Nazava ny fepetra napetraky ny Filoham-pirenena fa tsy misy mahazo mivoaka ny Nosy be ireo miditra ao Nosy be, ary avy dia mody any aminy avy eo.
Gaga anefa fa ny fitondram-panjakana, izay soloan'ny prefet sy maire tena mihitsy no mitsena ity mpanan-kato ity ao Sambava, izay nanokafana ny salon d'honneur, miaraka amin'ny samboadin'ny Ben'ny Tanàna sy akanjo fitafy ofisialin'ny préfet.
Tsy manao aro vava orona akory aza izy ireto izay vahiny tsy hay avy aiza avy, tsy misy test PCR tonga aty Sambava, ny tao Nosy be mbola tsy hay? Mifampikasoka amin'ny olona maro izay liana te hijery sy hifandray tanana sy maka sary selfie mihitsy.
Tsara ho fantatra raha Visa inona moa izany no nidiran'izy ireo eto Madagasikara, satria raha ny dokam-barotra mandeha dia hitady vola amin'ny alalan'ny spectacle izy ireo, ka ny Visa tourisme ve na Visa à l'aéroport mahazaka anaovana fitadiavam-bola, izay anakarama azy hatrany amin'ny 6000 euro na 28 000 000 ariary raha ny fanadihadiana natao.
Raha ny fepetra ara-pahasalamana aza dia tsy mihoatra ny 200 ny olona azo voariana, ka asa raha hanaja izany ity fikarakarana korana sy hetsika ity. Raha an-kalamanjana dia tsy maintsy manaja ny elanelana 1m, nisy aza anefa ireo mpikarakara seho malagasy no tsy nomena alalana, toa an'i Bolo Pixx sy Jean Aimé tao Ambatomainty andaniny sy ankilany i Jean Aimé sy Mijah tao Manakambahiny.
Samy tokony ho natao tamin’ny alahady 25 oktobra daholo ireo seho ireo saingy tsy nisy tanteraka na efa nahazo fahazoan-dalana tamin’ny Ben’ny tanàna isany.
Ry Big MJ tokony atao ny 15 novambra ao Ambalavao, rava maina, nefa efa lany vola nikarakarana.
Tsy misy malahelo ny fahatongavany, fa aoka kosa hitovy ny rehetra, rehefa sokafana ny sisin-tanin'i Madagasikara dia sokafy ho an'ny rehetra fa samy te hifanerasera amin'izao tontolo izao ny maro, raha mbola tokony hihidy kosa dia aza asiana fanavahana.
Atsy Afrika atsimo fiavian'ireto mpanakanto ireto moa dia 744  732 ny voan'ny Covid-19, raha 690  903 no sitrana ary 20  076 no namohy ny ainy lavon'aretina.
Mirary soa an'i Sambava tsy avy aminareo indray no idiran'ny 2ème vague Covid-19.